I-Quiche Easy Recipe - Ungadliwa
ungayipheka kanjani i-cauliflower ngaphandle kwesitimu
zithini amathiphu enkomo asikwe
zingaki imvuthu zesinkwa kucezu lwesinkwa
stocking imibono stuffer abadala 2016
Isaladi engu-7 ungqimba nomxube wokugqoka i-ranch
I-Quiche Easy Recipe
Lokhu I-Quiche Easy Recipe iqala ngoqweqwe lukaphayi olwenziwe ngaphambi kwesikhathi kepha akekho okufanele azi! Kulayishwe i-ham, ushizi no-anyanisi oluhlaza futhi kuyisidlo sasekuseni esilula noma isidlo sakusihlwa!
Ungangeza noma yini oyifunayo kule recipe elula ye-quiche - eminye imifino, ushizi ohlukile noma isinongo - kepha i-ham noshizi kuyindlela yethu esiyithandayo yokwenza lokho. Angazi ngawe, kodwa siyathanda amaqanda nganoma yisiphi isidlo sosuku lapha. Sizothatha noma iziphi izizathu ukuze sibajabulele ibhulakufesi, isidlo sasemini noma isidlo sakusihlwa, futhi le recipe elula ye-quiche nakanjani ivala igebe phakathi kwabo bobathathu. Ngiyakuthanda ukugcina izindlela zami zokupheka ze-quiche zilula, futhi ngizikhonza nge-lovely izithelo noma fresh fresh isaladi !
Uma uwathanda amaqanda njengoba senza, ungahle uthande lokhu I-Casserole yokudla kwasekuseni nge-Bacon noma lokhu Isidlo sasekuseni saseMexico Slow Cooker
Kunokwehluka okuningi kakhulu kuresiphi ye-quiche yakudala, kepha bengifuna ukugcina izinto zilula kakhulu kulokhu. Siqala ngoqweqwe lukaphayi olwenziwe ngaphambi kwesikhathi, futhi siligcwalise ngakho konke okuhle!
Ngokuqinisekile ungasebenzisa uqweqwe lukaphayi olwenziwe ngaphambili, olufriziwe osevele ucindezelwe epanini elilahlwayo uma ufuna ukwenza le quiche ibe lula kakhulu, kepha ngithanda ukuyikhipha futhi ngiyibhake kwelinye lamapuleti wami ophaya. Ngaleyo ndlela akekho okufanele azi ngezinqamuleli esizithathile!
ungakwazi yini ukosa ummbila ofriziwe ohlakeni
Amathiphu Wokwenza Le Quiche Recipe Elula:
Le recipe ibingenakuba lula ngokwengeziwe - qala nge uqweqwe lukaphayi olwenziwe ngaphambi kwesikhathi , bese uyigcwalisa ngezinto zakho ozithandayo, kanye namaqanda nobisi.
Izindlela zokupheka eziningi ozithola zinezithako eziphekiwe futhi zidinga ipani elengeziwe kanye nesikhathi esingeziwe sokulungiselela. Singa usebenzisa i-ham ephekiwe, i-cubed no-anyanisi oluhlaza kule iresiphi ukuqinisekisa ukuthi le recipe elula yokudla kwasekuseni ihlangana ngokushesha okukhulu ngangokunokwenzeka!
Ungakhohlwa ukubheka i-quiche njengoba ibhaka - awufuni ukuthi uqweqwe lube nsundu kakhulu phezulu njengoba amaqanda epheka! Uma kunesidingo, amboze iringi engaphandle yoqweqwe nge-foil encane ukuyivimbela ukuthi ingaqhubeki ngokusobala.
Uma ungeyena umlandeli woqweqwe lukaphayi lwendabuko, zama ukwenza i- Puff khekhe Quiche noma lezi I-Mini Quiche elula yenziwe nge-wonton wrappers!
Ungasenza Yini Quiche Ngaphambi Kwesikhathi?
Uyabheja! Uma usubhakiwe, pholisa i-quiche kuze kube amahora amabili ekhawunteni, bese ufaka esiqandisini. Ukuze uphinde uvuselele, vala i-quiche nge-foil bese ubhake cishe ku-325F (kuze kube ukufuthelana nje). Ukupholisa ngaphambi kokufaka esiqandisini kusiza ukugcina uqweqwe lukhuni kancane.
Uyenza Kanjani I-Quiche Engafakwanga:
Uma ufuna enye indlela engenayo i-gluten, noma awuyena nje umlandeli omkhulu woqweqwe (hheyi, sonke sinezintandokazi zethu!), Ungakwazi ukweqa uqweqwe bese uvele uthele ingxube yeqanda ungene pan ukwenza lokhu kube iresiphi ye-quiche engafakwanga. Kulula kanjalo!
Vele ungakhohlwa ukugcoba ipuleti likaphayi kuqala ngoba amaqanda angaba nzima ukuphuma lapho esephekiwe!
Njengoba ungeke udinge ukubheka uqweqwe lwezimpawu zokupha, uzomane ubhake uqweqwe olungenalutho kuze kube amaqanda asethwe ngokuphelele phakathi nendawo.
OKWENGEZIWE ISIDLO SOKUDLULA SIYAYIPHENDULA UZOTHANDA
I-Overnight Breakfast Casserole ene-Sausage - intandokazi yomndeni ephansi!
I-Blueberry Baked Oatmeal - inketho enempilo, futhi emnandi
Amakhukhi eBanana Breakfast - kwasekuseni usohambweni
Oatmeal yesiqandisi ebusuku
Ubhanana Nut Crunch Muffin - mmmm, muffin !!
Isikhathi sokulungiselelaishumi nanhlanu imizuzu Isikhathi Sokupheka35 imizuzu Isikhathi Esipheleleamashumi amahlanu imizuzu Izinkonzo6 izinsizakalo UmbhaliU-Ashley Fehr Le Easy Quiche Recipe iqala ngoqweqwe lukaphayi olungaphambi kwesikhathi kodwa akekho okufanele azi! Kulayishwe i-ham, ushizi no-anyanisi oluhlaza futhi kuyisidlo sasekuseni esilula noma isidlo sakusihlwa! Ungangeza noma yini oyifunayo kule recipe elula ye-quiche - eminye imifino, ushizi ohlukile noma isinongo.
▢1 uqweqwe lukaphayi olufrijiwe
▢6 amaqanda amakhulu
▢¾ inkomishi ubisi noma ukhilimu
▢¾ isipuni usawoti
▢¼ isipuni upelepele omnyama
▢1 inkomishi inyama ephekiwe oqoshiwe
▢1 ½ izinkomishi ushizi osikiwe ihlukaniswe
▢3 wezipuni anyanisi oluhlaza
Hlanganisa uqweqwe lukaphayi bese ucindezela ku-9 'plate plate, uqhwilise imiphetho ephezulu uma ufisa.
Endishini enkulu, hlanganisa amaqanda, ubisi, usawoti kanye nopelepele.
Fafaza i-ham, 1 inkomishi yoshizi, no-anyanisi oluhlaza ku-pie crust bese uthele ingxube yeqanda ngaphezulu. Fafaza cheese inkomishi ushizi ngaphezulu kwenhlanganisela yeqanda.
Bhaka imizuzu engama-35-40 kuze kube yilapho isikhungo sisethwe ngokuphelele. Vumela ukupholisa imizuzu engu-5-10 ngaphambi kokusika nokukhonza.
Amakholori:299,Amakhabhohayidrethi:16g,Amaprotheni:ishumi nanhlanug,Amafutha:18g,Amafutha agcwalisiwe:7g,Cholesterol:190mg,I-Sodium:705mg,Potassium:167mg,Ushukela:ezimbilig,Uvithamini A:505IU,Uvithamini C:0.6mg,I-calcium:208mg,Insimbi:1.7mg
Igama elingukhiyeiresiphi elula ye-quiche InkamboUkudla kwasekuseni KuphekiweWaseMelika© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .
Buyisela le Recipe yasekuseni enkulu
ubhontshisi obusanda kufriza emoyeni
UKUPHENDULA OKWENGEZIWE UZOTHANDA
Yenza Phambili Amaqanda Ama-Muffin